Kenya oo maanta fureysa duullimaadyadii caalamiga ahaa kaddib xayiraaddii Corona virus | Dalka Times - News and Politics
Home SO WARKA Kenya oo maanta fureysa duullimaadyadii caalamiga ahaa kaddib xayiraaddii Corona virus
Kenya oo maanta fureysa duullimaadyadii caalamiga ahaa kaddib xayiraaddii Corona virus
Mr; Macharia ayaa sheegay Dadka rakaabka ah in lala socon doono xaaladdooda muddo laba Todobaad ah, iyagoo aan la karantiili doonin haddii heerkulkoodu ka hooseeyo 37.5 Digrii Celsius iyo haddii aysan lahayn astaamaha Covid-19ka.
WHO oo Afrika uga digtay halista ka imanaysa qaadista xayiraadaha cudurka Covid-19
Sheekh Maxamed Idiris oo si kulul uga hadlay erey bixin cusub ku cusub Soomaalida
Wasiir ka digay inay Nigeria la mid noqoto sida Soomaaliya oo kale.
Xukumada waysay kalsoonida golaha Shacabka ma magacaabi kartaa guddiga adeega garsoorka ?.
WHO oo Afrika uga digtay halista ka imanaysa qaadista xayiraadaha cudurka...
Sheekh Maxamed Idiris oo si kulul uga hadlay erey bixin cusub...